तत्काल कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्छ : गगन थापा – NepalAustralianews.com
मातातीर्थ औंशीमा सरीता निरौलाको आमा सार्वजनिक
इनास अष्ट्रेलियाको चौथो अध्यक्षमा मनोज अधिकारी
बढ्दै अष्ट्रेलियामा कोरोना संक्रमण, प्रतिदिन २ लाखसम्म पुग्ने अनुमान
एडिलेडमा पहिलो भेट्रान कप फुटबल आयोजना गर्दै नेपाली पाठशाला
सरिता निरौलाको ‘मलाइ पनि बच्चा बनाउन’ सार्बजनिक
December 10, 2017 कुराकानी
संविधानको नयाँ व्यवस्थाअनुसार मंसिर १० र २१ गते भएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस निकै खुम्चन पुगेको छ। कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूको विपक्षमा निर्वाचन परिणाम परिरहेका बेला काठमाडौँ–४ बाट युवा नेता गगनकुमार थापा भने तीन हजार बढी मत अन्तरसहित प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचन परिणामसहितका विषयमा केन्द्रित भएर उनीसँग बालकृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानी :
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनेपछिको पहिलो निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुँदा कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ?
निर्वाचनको परिणाम आइरहँदा देशैभरि नेपाली कांग्रेसको जुन अवस्था आइरहेको छ, त्यसले दुःखी र स्तब्ध बनाइरहेको छ। तर यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि मलाई जसरी विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ, मेरो विजय मतदाताप्रति समर्पित गर्न चाहन्छु। सबैप्रति आभारी छु।
परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न निकै मेहनत गर्नुपर्‍यो है यसपालि ? तपाईंप्रति पनि मतदाताको असन्तुष्टि धेरै रहेछ?
दोस्रो संविधानसभामा भन्दा यसपटक कुल मतमा थोरै तलमाथि भएको होला तर मसँगको प्रतिस्पर्धामा दुई दल मिलेर आउनुभएको थियो। त्यसले निर्वाचनका क्रममा केही दबाब स्वाभाविक थियो । अर्को स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टी पराजित भएको परिवेशबाट यहाँसम्म आइपुग्ने कुरा निकै चुनौतीपूर्ण थियो । पार्टीको प्रतिकूल अवस्थामा मलाई निर्वाचित गराउने सबै मतदाताप्रति म धेरै कृतज्ञ हुनुपर्ने अवस्था छ। काठमाडौँ–४ का मतदाताले मप्रति माया र विश्वास अझ बढी गरेको ठानेको छु।
देशभरिका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले तपाईंप्रति भरोसा गरेका थिए तर आफ्नै क्षेत्रमा सीमित हुन बाध्य हुनुभयो ?
निर्वाचनको तयारीका लागि हामीलाई जुन समय पुग्छ भन्ने थियो प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैसाथ भएकाले त्यो पर्याप्त भएन । स्वाभाविकरूपमा दोहोर्‍याएर उम्मेदवार बन्दै गर्दा पहिलाको भन्दा अफ्ठेराहरू थिए ।
स्थानीय विकासका असीमित आकांक्षा थिए । स्थानीय तह नहुँदा त्यहाँका सबै समस्या सांसदसँगै जोडिएर आउने गथ्र्याे । त्यसप्रति मतदाताका प्रश्न भएकाले सबै मतदातालाई भेट्न आवश्यक भएकाले अलि बढी समय आफ्नो क्षेत्रमा दिनुपरेको हो। मेरो क्षेत्र मात्र होला, प्रतिस्पर्धी मित्र सबैभन्दा बढी संगठित भएर भयानक प्रोपगन्डा मात्र गरिएन, एमाले अध्यक्ष केपी ओली दोहोर्‍याएर निर्वाचन प्रचारमा आउनुले स्वाभाविकरूपमा ममाथि दबाब थियो । तर पनि काठमाडौँभन्दा बाहिर नगएको होइन, तर पहिलाभन्दा अलि कम मात्र हो।
तपाईंमाथि किन यति धेरै आक्रमण ?
निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा देशका विभिन्न ठाउँमा बम विस्फोटका घटना भए । मेरो निर्वाचन क्षेत्र पनि त्यसबाट अछुतो रहेन । यी सबै घटना गलत र निन्दनीय थिए ।
जनतामाझ पुग्दा पहिला र अहिले जनताका आशा र अपेक्षामा के अन्तर रहेछन् ?
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा जनतामाझ पुग्दा संविधान निर्माणको सबैभन्दा ठूलो विषय थियो । पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण हुन नसक्दा जनतामा अन्योल र आक्रोश थियो । तर, यो पटक जनतामा स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको आकांक्षा छन् ।
जनताले एउटा विश्वास र भरोसा गरेर तपाईंलाई जिताएर पठाए अब त्यसलाई कसरी पूरा गर्नुहुन्छ ?
स्थानीय तहको विकास निर्माणसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि यसले योगदान गरोस् भन्ने आम मतदाताको अपेक्षा छ । निर्वाचन परिणाले त्यसलाई पूरा गर्न मेरा लागि थप चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ ।
जारी मतगणनाले कांग्रेस लामो समयसम्म प्रतिपक्षमा बस्ने अवस्था छ । प्रतिपक्षको बेन्चबाट काम गर्दा कतिपय जनताका आकांक्षाहरूलाई पूरा गर्न कठिनाइ आउँछन् तर पनि मेरो ठाउँबाट पूरा गर्ने प्रयास गर्नेछु ।
कांग्रेसप्रतिको भरोसा र विश्वास त पूरै गुमेछ होइन ? परिणामले त्यही देखायो ?
दुई ठूला दल मिलेर निर्वाचनमा जाँदै गर्दा र विगतका निर्वाचन परिणाम हेर्दा यो नतिजा एकदमै अस्वाभाविक होइन । तर, हामीलाई के लागेको थियो भने एउटा पार्टीको भोट अर्को पार्टीमा सर्छ भन्ने लागेको थिएन, त्यो गलत साबित भयो ।
त्यति मात्र हो त कांग्रेस पराजयको कारण ?
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछिको चार वर्षमा संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउनेसहितका सबै जिम्मेवारी पूरा गर्‍यौं। तर, हामी जनताको बीचमा छाती ठोकेर अब देश कांग्रेसलाई सम्हाल्न दिनुपर्छ । देशलाई आर्थिक समृद्धिमा लैजान्छौँ भन्न सक्नुपर्ने थियो, त्यो सकिएन ।
किन सकेन त कांग्रेसले ? तपाईं पनि पार्टी केन्द्रीय सदस्य होइन र ?
पार्टीका केही गलत निर्णय, हामीले गरेको राम्रा काम जनता माझ पुर्‍याउन नसक्नु । आम नागरिकबीचमा पार्टी नेतृत्वप्रति चरम अविश्वासका साथै समयमा सही निर्णय गर्न नसक्नुको परिणाम हो। अर्को केन्द्रीय सन्देश (सेन्ट्रल म्यासेज) लिएर जान सकेनौँ।
संविधान निर्माण गरे पनि विगतमा कांग्रेसले पटकपटक पाएको अवसरलाई सदुपयोग नगर्दा अहिलेको अवस्था आएको होइन?
यसपटक कांग्रेसलाई दिएको जिम्मेवारी संविधान निर्माण गर्ने, शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउने, सबैलाई जोड्ने, संघीयताको व्यवस्थापन गर्ने र समयमा चुनाव गराउने होइन ? अघिल्लो पटक नसकेको कामलाई कांग्रेसले कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । कांग्रेसले स्थिरता दिएन भनेर निर्वाचनमा नारा लाग्यो । तर, २०६४ पछि सबैभन्दा कम समय कांग्रेस सरकारमा बसेको हो ।
पार्टीको वर्तमान नेतृत्वको औचित्य सकियो ?
अहिले जुन पंक्तिले कांग्रेसलाई नेतृत्व गरिरहेको छ, अब उहाँहरूले विश्राम लिने बेला आयो । यसको अर्थ उहाँहरूप्रतिको मेरो अनादार होइन। उहाँहरूले नेपाली समाज र कांग्रेसलाई दिनुपर्ने योगदान दिइसक्नुभयो । त्यसैले उहाँहरूबाट थप कुरा खोज्नु नेतृत्वप्रति नै अन्याय हो, हामी कृतज्ञ हुनुपर्छ । निर्वाचनअघि हामीले त्यस कुरालाई बुझ्न चाहेनौँ । संविधान निर्माणको चरण पूरा भएपछि पार्टीको यो पुस्ताले अर्को पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सक्नुपथ्र्याे । हामीले त्यो प्रयास गरेका पनि थियौँ तर सफल हुन सकेनौँ।
भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीका बेला हाम्रो पोजिसनले जनताको ठूलो पंक्ति आक्रोशित बनेको थियो । त्यससहित पछिल्ला दुई वर्षमा हामीले गरेका कतिपय निर्णय गलत थिए । मतदातालाई हिजो के गरेर आएभन्दा पनि भोलि के गर्छ भन्ने कुराले प्रभावित गर्छ । यो निर्वाचनमा जनतालाई यस्तो गर्छौं भनेर हामीले भरोसा जगाउनै सकेनौँ ।
कहाँ कहाँ चुक्यो त कांग्रेस ?
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर चुनावमा उठ्लान् भन्ने अनुमान लगाउन सकेनौँ ।
कांग्रेस सुधार चाहिँ कसरी गर्ने त?
पार्टीको विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्छ । पहिलो कुरा, पार्टीको एउटा पंक्तिले अब विश्राम लिनुपर्छ । त्यसले नयाँ तरंग ल्याउँछ। हामी निर्वाचनमा पराजित भयौँ भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ मात्र भन्यौं। हामीले उठाएको शंकामा जनतालाई बुझाउन सक्नुपथ्र्याे। सबै क्षेत्र, भूगोल, जात, धर्मलाई जोड्ने त कांग्रेस मात्र हो। तर, हामीले त्यसलाई स्थापित गर्न नसकेका मात्र हौंँ । कांग्रेसप्रति जनताको आक्रोश सिद्धान्त, विचारभन्दा हाम्रो नेतृत्व, कार्यशैलीको हो। जुन कुरा बदल्न गाह्रो छैन। जनतालाई परिर्वतनको अनुभूति गराउन सके जनताले हामीप्रति फेरि विश्वास र भरोसा गर्नेछन्।
प्रत्यक्षतर्फ एमाले एक्लै बहुमतको निकै नजिक, गठबन्धनको दुइतिहाई आउने
प्रत्यक्षतर्फ एमालेको बहुमत
साउथ अष्ट्रेलियाबाट मातातिर्थ औंसीको अवशरमा "आमा" गीत सार्वजनिक भएको छ । ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र...
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाज (इनास) अष्ट्रेलियाको गत बुधबार...
अन्तरराज्जिय एवं अन्तराष्ट्रिय सीमामा लचिलो बनेसँगै अष्ट्रेलियामा कोरोना...
साउथ अस्ट्रेलियाको एडिलेडमा पहिलोपटक भेट्रान कपको आयोजना हुने...
साउथ अष्ट्रेलिया- साउथ अष्ट्रेलियाको एडिलेडमा बस्दै आएकि सरिता...
साउथ अष्ट्रेलिया- कोरोनाभाइरसका कारण अष्ट्रेलियामा लामो समयदेखी कार्यक्रमहरु...
कोभिडबिरुद्दको खोप लगाउँदा नौ करोड
अष्ट्रेलिया- संसारमा घेरैले कोभिडबिरुद्दको खोप लगाउन नपाईरहेको अवस्थामा...